तर पनि कलम र आवाज बन्द हुने छैनन्
– मनोजकुमार श्रेष्ठ / सोलुखुम्बु सञ्चार क्षेत्रमा सम्लग्न व्यक्तिहरु मुलुकभरी असुरक्षित बन्दै गइरहेकाछन् । यस क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरुलाई दिनहुँ धम्की दिएर, लगातार हत्या श्रृंखलालाई अघि बढाएर अराजकताको राज गराउन कतिपय लागेको आभाष जो कोहीले पनि यतिखेर सहजै...
[तपाईलाई संझना छ ? दलु पुन कुनै बेला ईराकमा चौकिदारी गर्थे त्यहाँ । तरपनि उनले ईराक बस्दा केहि सामाग्रि नेपालप्लस मार्फत पाठकसित बाँडे । उनको योजना रहेछ- नेपाल पुगेर फेरी अफ्गानिस्तान फर्किने । तर परिवारले उनलाई अफ्गानिस्तान फर्किन...
डिसेम्बर ३१, २००९
-अर्जुन दुङ्मेन / बगदाद, इराक हिमालय पर्वतहरु पग्लिएर झर्दैछन। हिमतालहरु फुट्दैछन। पृथ्वीका धरातलका कुनै क्षेत्रहरु डुब्दैछन। प्राकृतिक प्रकोपको रुपले डुबानमा पर्दैछन। कुटपिट, मारपिट, झगडा, दमन, शोषण, बिलाशीपन अकल्पनिय ढंगले तिब्र गतिमा बृद्धि भईरहेछ, चेतनशील भनौदो मानब प्राणी...
अक्टोबर ७, २००९
–गीता घिमिरे/देहरादुन कति गाँउ मात्रै घुम्ने । अनि सधैं गाँउ घरका मात्रै कुरा । कहिले त यसो शहरबजार तिर गई रमाईलो हेर्न मन लाग्ने । कार्यलयबाट विदा नलिएको पनि निकै भएको थियो । फेरी दशैको टिका पछि...
ईटालीमापनि भब्य रुपमा जम्यो तीज
अगस्ट २५, २००९
–मुकुन्द पौड्याल/मिलान (ईटाली) नेपाली दिदीबहिनीहरु आफ्नो जन्म भूमि देखि धेरै टाढा । माईती घरबाट टाढा । माईती घर कसरि जाने यति ताढाबाट ? जन्मभूमि हुँदा माईती जाने गरेको मन । बिदेश छँदैमा नमनाएर मान्छ ? तीज लाग्न...
अगस्ट २३, २००९
-अमर सिंह अधिकारी- ओ दाई खाना खाने होइन ? वसबाट ओर्लन नभ्याउदै १५-१६ वर्षको देखिने केटो कराउदै थियो । के के खाना पाइन्छ ? त्रिशुलीको माछा, मासु भात, दही सवै पाइन्छ उसको जवाफ थियो । हामीलाई पनि...
हिन्दी भाषालाई विवादमा राख्ने कि मान्यता दिने ?
अगस्ट १५, २००९
“मेरो प्रश्न के हो भने हरेक नेपालीले (चाहे त्यो मधेशी होस् वा पहाडी) आफनो छातीमा हात राखेर भनोस् कि उसलाई हिन्दी भाषा वुझ्न र वोल्न आउँछ कि आउदैन ? विभिन्न समयमा गरिएको अध्ययनले प्रमाणित गरेको छ कि...
नेपालका उपराष्ट्रपती की हिन्दी भाषा प्रचार गर्ने नेपाल संयोजक ?
अगस्ट ६, २००९
[नेपाल र नेपालीको प्रथम उपराष्ट्रपति भए पछि देश र जनतासामु सपथ लिंदा हिन्दी भाषामा लिने, राष्ट्र र जनतालाई सूचित नै नगरी भारतको भ्रमण गर्ने, सर्बोच्च अदालतले हिन्दी भाषामा सपथ लिने कार्यलाई गलत साबित गर्दा राष्ट्र, जनता र...
-दिलबहादुर चौधरी इतिहासका पाना पल्टाउने हो भने बिभिन्न कालखण्डमा आदिबासी जनजातिहरु तमामखाले दुःखकष्ट सहँदै कष्टपूर्ण जीवन ब्यतित गर्दै आइरहेका छन् । पौराणिक कालका साम्बरा जसका ९९ वटा दुर्गहरु थिए, जो सयौं वर्षसम्म इन्द्रसँग लडेका थिए । अन्तमा...
लुखास्तसँग १३ बर्षपछि प्रत्यक्ष कार्यक्रममा भेट
जुलाइ ७, २००९
-एस बी छन्त्याल, बेल्जियम अन्तरकृया प्रकाशनका ‘नवयुवा’ मासिक पत्रीकाको लुखास्त शिर्षकमा ब्यङग्यपूर्ण लेख पढ्ने गरेको थिएँ १३, १४ बर्ष पहिले । र उनी थिए- चर्चित हास्यब्यङ्ग्य कलाकार मनोज गजुरेल । अहिले उनै हास्यब्यङ्ग्य क्षेत्रमा ख्याती कमाएका कलाकारको...